WordPress Mobile Okwu
Fọdụ ndị folks ekwuola otu blog si dị mma na ngwa ekwentị. Anyị na-anata ihe dịka 5% nke ndị ọbịa anyị site na ekwentị mkpanaaka… 2% na iPhone naanị.
Ọ dị mkpa ịnye ahụmịhe onye ọrụ dị iche na ngwaọrụ… ma ọ na-etinye n'ọrụ Onswipe maka ahụmịhe iPad pụrụ iche - ma ọ bụ iji ya WPtouch Pro maka ahụmịhe mkpanaka WordPress na iPhone, Droid ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ. Mara: WPtouch Pro na-akwado iPad… ọ bụghị naanị dị ka Onswipe.
Kedu otu mkpa mkpanaka mkpanaka ị nwere ike ịjụ? Dị ka anyị si kwuo Analytics, nleta mkpanaka na mbadamba ihe dị ka ọnwa 22.1% karịa ọnwa! Nleta iPhone dị elu 32.2% ọnwa karịa ọnwa.
Nke a kwekọrọ na mkpanaka mkpanaka na ojiji ịntanetị. Ekwentị mkpanaka email na-agụ dikwa na ịrị elu… dị ka ịzụ ahịa… ya ihe karịrị 50% nke ndị ọrụ ekwentị na-azụ ahịa online.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ịma jijiji na-efu nke na-ebuli ha ọdịnaya maka mobile ojiji… ma ha ekwesịghị. Ọtụtụ usoro nchịkwa ọdịnaya nke oge a nwere ikike itinye mobile-akọwapụtara isiokwu ma ọ bụ mpempe akwụkwọ. WPtouch Pro naanị ụgwọ $ 39 kwa saịtị! Ga - achọ ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa gị site na 22% maka $ 39? Enweghị m n'aka na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-agaghị.
Tags: mkpanaka wordpresswordpress mobilewordpress mobile ngwa mgbakwunyeakpawpnuch pro